Banyere Anyị - Ding Zhou Tian Yilong Metal Products Co., Ltd.
Anyị, a n'ichepụta na trading ngwakọta, a ezinụlọ ekesịpde azụmahịa na-aga n'ihu ọrụ kemgbe 1990. Anyị na-emepụta na mbupụ widest ngwaahịa mix nke waya, waya netting na ngere na yiri ihe. Anyị bụ ndị gị tụkwasịrị obi isi iyi maka gị niile waya ntupu chọrọ.
Anyị na-etinye aka n'inye ngwaahịa dị mma nke na-anọchite anya uru dị mma na ọkwa n ofomi nke ọrụ ndị ahịa na ọkwa niile na azụmaahịa anyị. Ọnọdụ anyị nke akụrụngwa, ahụmịhe dị ukwuu, njikwa njikwa sayensị na ndị otu raara onwe ha nye na-eme ka azịza ntanetị zuru oke maka ngwa ụwa. Nke a gụnyere:
Chain waya ntupu, welded na kpara ntupu na GAW, GBW, ịkwanyere ntekwasa na igwe anaghị agba nchara, Chain njikọ ngere, Weld waya ntupu, Kpaliri waya, Waya nwere ogwu, Cokwanyere ntekwasa waya
Anyị na-edebe ọtụtụ ngwakọ ma anyị nwere ike ịtụ ihe ndị pụrụ iche site na igwe igwe. Site n'ịnọgide na ụkpụrụ nke "Ọkacha mma, nnyefe ọsọ ọsọ, Ọrụ ọsọ ọsọ", anyị enwetala aha ọma na mba ofesi, gụnyere Europe, America, Southeast Asia, Mid-east, North American, wdg. Anyị na-ele anya inwe ohere itinye anyị 25 afọ nke ihe ọmụma na ahụmahụ na-arụ ọrụ gị!
Nna m bidoro site na ụlọ ọkụkọ nke ụlọ ọkụkọ, na-ere ụlọ ntanetị anyị.
Dingzhou Tengda Metal Factory tọrọ ntọala. Ọtụtụ igwe na-ese ihe igwe eji azụta ihe bụ nke mbụ a na - emepụta ahịrị. Q195 (6.5mm) nwere ike mmasị n'ime dị iche iche ụdịdị site waya ịbịaru igwe.
Mgbe mgbalị ye ihe ọmụma tara ụba, e guzobere eriri mbụ. Enwere ike ịchekwa ụgwọ nke ịme waya ọkụkọ na ntanye welded ọtụtụ. Glọ ọrụ Tengda na-ebute nnukwu nzọụkwụ ya.
China nabatara nzukọ ahia ụwa (WTO), nke pụtara na ngwaahịa anyị ga-aga mba ọzọ. Na ahia anyị rịrị elu na 2002-2004, anyị enwetala oke oke n’afọ a.
elebara anya dị ukwuu na mmụba nrụpụta ọrụ, wee nwee oke oke.
emeela nnukwu azụmahịa, ebubatala ngwaahịa ndị ọzọ. E wuru igwe igwe brunch n'oge afọ ndị a, nke kachasị mepụta GAW (Galvanized After Weaving), waya nke ọzọ, onye nke ọzọ na-emepụta PVC mkpuchi mkpuchi / waya ntupu . N'otu oge ahụ, eriri eriri waya ejirila nke ọma, otú ahụ ka eriri ahịrị. anyị emeela ka gas bụrụ ihe nnọchi nke kol, gburugburu ebe obibi enweela mmụba karịa karịa nke mbụ.
N'ịbụ onye nwere ike ibute ahịa, aga m enyere gị aka na:
Ọnụ Pnye ọnụahịa
Nkwado dị elu dị elu
akụkọ nyocha ụlọ ọrụ
Sọsọ soro ụkpụrụ CE
Obi ga-adị m ụtọ ijikọ ma nye gị ụfọdụ azịza. Na-atụ anya n'ezie
Na-arụ ọrụ gị.
Ding Zhou Tian Yilong Metal Products Co., Ltd. onwem na a ọkachamara otu. Usoro ọ bụla nwere onye ọkachamara ebubo.
Site n'ịgbaso ụkpụrụ nke "qualitydị kacha mma. Ọrụ ọkachamara. Nbudata ngwa ngwa." anyị nwetara ezigboaha na ndi ahia anyi zuru uwa.